Kungani uthi nezifiso ebusuku intombi yakhe?
Uma umfana othanda ngempela ntombazane, ufuna ukuba azungeze wakhe ngokunakekela, isisa nokunakekela. Usebenzisa noma yiliphi ithuba ukuze aveze imizwa yakhe, ukunikeza uthando futhi uyibonise indlela kuyena. Kwaze kwathinta inhliziyo bo Ikakhulukazi uma umuntu ethi izifiso ebusuku intombi yakhe. Kungashiwo ngqo embhedeni lapho umbhangqwana alala ndawonye, futhi kungenzeka ibe eyomphakathi ngocingo, wathumela ku-Skype noma uthumele umlayezo ku-e-mail noma i-smartphone. Kungakhathaliseki ukuthi indlela sidlulile isifiso, into esemqoka - liyisibonakaliso ukunakwa ziveze imizwa yazo ngobuqotho ngokusebenzisa amazwi. Ngakho-ke, kufanele njengoba mnene, futhi unothando futhi ibonisa isimo sengqondo sokuba indoda othandekayo wakhe. Dlala futhi omile "ubusuku obuhle" kungashintsha kube lonke inkondlo nobe indzaba mini-a ngamazwi uthando, izincomo for girls izifiso amaphupho amnandi.
Ukulala, sithandwa sami, ukulala
Efuna lala wamukela abantu ngothi lwabo, hhayi kuphela ngoba nomngane walo. Lokhu kwenziwa abazali, izingane, ogogo nomkhulu, odadewethu, abafowethu abangane nabanye ngamunye, osebenza nabo, uma ingxoxo waqhubeka kwaze ebusuku. Iziphakamiso ebusuku intombi yakhe abe umlingisi ekhethekile, ngoba isisa nokunakekela ethandekayo. Lena ngenye yama-ngamazwi athinta inhliziyo kakhulu uthando kowesilisa kuya kowesifazane. Kulokhu, isenzo ngokwayo indiva, izicelo ebusuku intombi yakhe - lena elinye ithuba ukuzwa izwi lakhe, ukuba ubonise uthando lwabo nangobuqotho imizwa. Nakuba isiko ebusuku omuhle efisela hhayi kuphela ukuhlonipha ingqopha-mlando (ezifana, isibonelo, ufisa ujabulele ukudla noma sawubona), futhi liqukethe ukubaluleka esiwusizo kakhulu. Ukukhuluma nomuntu "ubusuku obuhle", "Sweet Dreams", "ukuthi alale kahle," abantu khuluma ngokuzenzakalela lamagama ngaphandle ecabanga ukuthi asho ukuthini. Nokho, ahloselwe ukuqinisekisa ukuthi abantu kwadingeka ezolile ngempela, ngaphandle obumnandi, ukuqwasha kanye awakenings ebusuku izingalo amaphupho amnandi. Ekuseni wayengeke uvuke bejabule, ekhululekile, bejabule, lisebenza futhi zibe namandla. Yilokho bafuna ebusuku okuhle. Phela, bonke abantu uyazi ukuthi uzizwa kumuntu uma ebengalidluliselanga zalala. Kulokhu izifiso ebusuku intombi yakhe alihlukile.
Ngifisa ebusuku okuhle intombi yakhe
Ngakho yini ongayenza ukutshela sokulala ozithandayo, yini amazwi ukukhetha, ukuze labetibambile ezolile ngempela, ebusuku kuthule? Ukuthi waphupha amaphupho amnandi lapho lizibona lover yakhe? Ungacabanga izicelo eziningi kangaka, futhi nsuku zonke, noma kunalokho ebusuku, ezintsha ongakhuluma ngazo. Lokhu kuzokwenza ambonise lelo umlingani wakhe uyawazisa ethandekayo, nokuthi uyabakhathalela wakhe futhi ufuna naye ukuba njalo kusimangaze. Nokho, lokhu ngiyibona ngokuvamile imibhangqwana bengahlali ndawonye noma usanda kuphela bavumelana. Genesise, njengoba umthetho, ngokushesha ukudla zonke romance, kodwa kunalokho asankondlo benamandla ngesisa fiso ebusuku kuphela esifushane "ubusuku obuhle", futhi sisasebenza eziningi siyindlala. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba banakekele nomunye, futhi nangemva kweminyaka engu-20, ukukhuluma owesifazane wakhe amazwi afana esikhathini ubungqabavu bobusha bakhe. Kodwa kanjani ukuthi isifiso? Azithulele. Izintandokazi ebusuku isikhathi kuyoba njengoba ezolile futhi serene, njengoba yena bayokwazi ngalokho ukuthi zabo kulinda indoda ethembekile, ngothando futhi eqinile.
Indlela athokozise bona ngokwabo kanye nabanye?
Khetha ukuncoma amakhulu amantombazane kungenzeka
Ingabe umngane virtual esikhundleni okuxhumana real
Indlela ukushintsha isokhethi
Yikuphi imisipha abasebenza endaweni ezimfushane? Kanjani-sit-ups kube okuphumelela kakhudlwana?
I-lasagna enobuqili: iresiphi nge-lavash, inyama exutshwe nenyama yenkukhu enobisi
Isiko Kievan Rus. ithonya WaseByzantium
Kuphelelwa yisikhathi Sberbank ikhadi - yini okumele ngiyenze? Kuphelelwa yisikhathi Savings Bank credit card
"Maybach 62" - zonke kumnandi imoto okukhethekile, okuyinto engazange yatha-
Ingane imoto esihlalweni Siger: Izibuyekezo ikhasimende
Wayekuphi waseConstantinople? Njengoba manje ibizwa ngokuthi iConstantinople?
Ukungakwazi ukugxilisa ukugula ngengqondo izingane: izimpawu kanye nokulungisa. ADHD - ukungakwazi ukugxilisa hyperactivity ukugula ngengqondo izingane
Indzaba ku "Ukuduma": kungani play sisabenza?